Gool uu dhaliyay Yacquub oo ku hoggaamiyay Puntland in ay gaarto ciyaarta kama dambaysta ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSportsGool uu dhaliyay Yacquub oo ku hoggaamiyay Puntland in ay gaarto ciyaarta kama dambaysta ah
July 23, 2016 Puntland Mirror Sports 0
Ciyaartoyga Puntland. Sawirka: Puntland Mirror.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kooxda kubada cagta Puntland ayaa Hiiraan & Shabeelaha Dhexe ku garaacday 1-0 ciyaaraha maamul goboleedyada Soomaaliya, taasoo Puntland u sahashay u gudbida ciyaarta kama dambaysta ah.
Gool kaliya oo uu dhaliyay Yacquub Cusmaan ayaa keentay in Puntland ay ku garaacdo Hiiraan & Shabeelaha Dhexe 1-0.
Puntland ayaa ciyaarta kama dambaysta ah ee ciyaaraha maamul goboleedyada Soomaaliya la ciyaari doonta Jubaland maalinta Isniinta oo ay bishu tahay 25-ka July.
Jubaland ayaa ciyaarta kama dambaysta ah soo gaartay kadib markii ay gool ku laad kusoo garaacday Banaadir.
December 18, 2017 Ciyaartowga kubada cagta Puntland oo gaaray final-ka tartanka maamul goboleedyada Soomaaliya
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Wasiirka amniga dowlada Puntland Cabdi Xirsi Cali “Qarjab” ayaa ugu digay maamulka Somaliland dhaqdhaqaaqa ciidan ee ay ka wadaan gobolada Sanaag iyo Haylaan. Shir jaraaid oo wasiirka maanta ku qabtay xarunta madaxtooyada ee [...]